वैदेशिक राेजगारीकाे सिलसिलामा मलेशिया गएका शाहीको मृत्यु भएपछि बाकसमा नेपाल आएको शव खोलेर हेर्दा कसैको मन थामिएन – नेपाली सूर्य
वैदेशिक राेजगारीकाे सिलसिलामा मलेशिया गएका शाहीको मृत्यु भएपछि बाकसमा नेपाल आएको शव खोलेर हेर्दा कसैको मन थामिएन
November 5, 2020 November 5, 2020 Nepali SuryaLeaveaComment on वैदेशिक राेजगारीकाे सिलसिलामा मलेशिया गएका शाहीको मृत्यु भएपछि बाकसमा नेपाल आएको शव खोलेर हेर्दा कसैको मन थामिएन
यसै क्रममा दैलेखमा एउटा घटना पछिको एउटा तस्विरले निकै जो कोहीलाई भावुक बनाउछ । रोजगारीका लागि मलेसियामा पुगेका हिमबहादुर शाहीकाेशव बाकसमा घरमा आइपुग्दा आफन्त र सिङ्गो गाउँ नै सोकमा डुब्यो । यो तस्विरमा बाकस खोलेर शाहीको शव अन्तिम पटक आफन्तले हेर्न लागेको दृश्य हो जुन तस्विरले सार्है भावुक बनाएको छ ।
शाहीको मृत्यु पछि घरमा उनकी श्रीमती र छोरा काजक्रियामा बसेको दृश्यसंगै अर्को छोरा डाँको छोडेर रुँदै गरेको दृश्यले कसको मन नरुवाउला र ? यो तस्विर सामाजिक संजाल फेसबुकमा राख्दै मोहन शाही लेख्छन्, याे तस्वीरले साह्रै भावविह्वल बनायाे ! 😭😭😭
वैदेशिक राेजगारीकाे सिलसिलामा मलेशियामा रहेका भतिज हिमबहादुर शाहीकाे लास काठकाे बाकसमा घरमा पुगेपछि भावविह्वल परिवारजन । भतिजप्रति भावपूर्ण श्रद्धाञ्जली तथा शाेकसन्तप्त परिवारजनमा समवेदना । केहि तस्विर तल हेर्नुहोस
कोशी ग्याँसको सिलिन्डरमा साढे तीन केजी तौल कम
नसर्ने रोगबाट बच्न वातावरण जोगाउनु पर्छ भन्ने अभियन्ता डाक्टर धमलाको निधन